Izifundo eziyi-12 Ezisetshenzisiwe Kusuka Kubunikazi Obedlulele Kuya Kokumaketha | Martech Zone
Ukwenza amasu amahle wokumaketha kuyisilinganiso sezinto eziningi eziguqukayo. Ngaphandle kokuhlela okwanele namasu esikhathi eside, ukumaketha okudala imizamo inganciphisa umkhiqizo. Kepha imizamo yokumaketha ehamba kancane futhi ebucayi ingamisa eyodwa. Endaweni ethile emaphakathi yimpumelelo, edinga ukugxila okuqhubekayo ezinhlosweni zesikhathi eside zenhlangano, kepha ukuba nezinsizakusebenza ezingashintsha ukuqondiswa kanye namasu ngesikhathi sangempela njengoba imiphumela iba yenzeka.
Ngisanda kuqeda ukufunda Ubunikazi Obedlulele: Kuhola kanjani futhi kunqobe kanjani ama-US Navy SEALs. Kufundwa okuhle kwezifundo enkundleni yempi nokuthi zingasetshenziswa kanjani emizameni yebhizinisi yansuku zonke. NjengeVeteran Veteran, ngicabanga ukuthi angikhethi kakhulu ekwaziseni kwami ​​le ncwadi. Kepha njengomnikazi webhizinisi, angivumelananga okuningi ngezifundo engizitholile nokuthi zisebenza kanjani ebhizinisini lami.
Amagama ekhasi elilodwa agxume asuka ephepheni lapho ngiwafunda. Mayelana nababhali bencwadi, ngizohlela kabusha izinto ezibalulekile zobuholi ngizisebenzise kucebo lokumaketha lenhlangano lilonke:
Imigomo - hlaziya ukuthunyelwa kokumaketha, ukuqonda ukuthi kuthinta kanjani inkampani yakho, abantu bakho, nemizamo yakho. Khomba bese usho umsebenzi wakho wokumaketha bese uqeda izwe ngomkhankaso ngamunye.
Resources - khomba isabelomali, abasebenzi, izimpahla, amathuluzi, abaxhumanisi, nesikhathi esitholakalayo somkhankaso ngamunye.
Ukuhlela - hlukanisa inqubo yokuhlela, unikeze amandla ochwepheshe besilinganiso ngasinye noma isu lokuhlaziya izifundo ezingaba khona.
Ukukhethwa - nquma imikhankaso emihle kakhulu, uncike ekukhetheni i- elula imikhankaso nezinsizakusebenza ezigxile lapho zizoba nomthelela omkhulu khona.
Nika amandla - Ochwepheshe bezokumaketha ukuthuthukisa uhlelo lwesiteshi namasu akhethiwe abanobuchwepheshe nesipiliyoni kuwo.
Ukufinyelela - Hlela okungahle kwenzeke ngokungalindelekile esigabeni ngasinye somkhankaso. Ungayikhulisa kanjani imiphumela njengoba kwenziwa umkhankaso? Yini inqubo uma kwenzeka izinto zingahambi kahle?
Izingozi - ukunciphisa izingcuphe ezingalawulwa ngangokunokwenzeka. Ingabe zikhona izinqubo zokulawula, zokuhlela, kanye nokugunyaza ezingasetshenziswa ukuqinisekisa ukuthobela?
Thumela - nika amandla ochwepheshe bakho ukuthi benze izingxenye zohlelo ngenkathi usakwazi ukuma emuva uthathe ubuholi kuyo yonke inqubo. Kungumsebenzi wakho ukuqinisekisa ukuthi ukushayisana kuyagwenywa, futhi izinsiza zithunyelwa ukuqinisekisa impumelelo yomsebenzi jikelele.
Gada - hlola njalo futhi ubuze uhlelo ngokuqhathaniswa nolwazi oluqhamukayo ukuqinisekisa ukuthi luyaqhubeka nokusebenza.
Brief - xhumana nohlelo kubo bonke ababambiqhaza nezimpahla ezisekelayo, kugcizelelwa inhloso yobuholi.
Buza - buza imibuzo futhi uhlanganyele ezingxoxweni nasekusebenzisaneni nawo wonke umuntu ukuqinisekisa ukuthi baqonda zonke izici zomkhankaso ngamunye nokuthi basebenzisana kanjani.
debrief - Hlaziya izifundo ozifundile bese uzisebenzisa ekuhleleni okuzayo ngemuva kokuba umkhankaso wenziwe.
Kuyathakazelisa ukuthi, bekungadingi ukuthi ngiguqule amagama amaningi kakhulu ukusebenzisa izifundo ezifanayo ezitholwe enkundleni yempi kulabo abasemkhankasweni wokumaketha. Kuzo zonke izigaba zale nqubo eziholela emkhankasweni nasekuxoxeni ngemuva kwawo, kugxilwe ekusetshenzisweni kwezinsizakusebenza kahle, ukuzisebenzisa kahle, bese kulandelwa ukusebenzisa izifundo ozifundile.
Kukhona nobukhosi obungabonakali lapha okungafanele bungabonakali. Ukube beyiyindlela obuphethe ngayo umnyango wakho wezokumaketha nesabelomali, yonke imikhankaso ibizohambisana nezinhloso zenhlangano. Simangele ukuthi kungakanani umsebenzi ocelwa ukuthi siwenze ngamakhasimende ethu ongawenzi ukuvumelanisa ngenani langempela enhlanganweni. Uma kungasizi umugqa wakho ophansi - yeka ukukwenza!
Tags: ubunikazi obedluleleJocko WillinkULeif Babinizincwadi zokumakethaizimpawu zasolwandleukufundaufundauphawu
Izeluleko Zokuthengisa Zedijithali Ezihlukile ezi-3